HomeWararka CaalamkaQaxootiga diidmada heesta in laga Caawiyo Sharciga ayaa kamid ah Sharciyada Cusub ee Midowga Yurub
September 27, 2020 Wararka Caalamka, Wararka Denmark, Wararka Finland, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Midowga Yurub waxa markan u soo jeestay Xaalada Qaxootiga Yurub oo noqotay hadal heynta ugu badan ee warbaahinta yurub aad uga hadleen isbuucii lasoo dhaafay kadib markii Gudiga midowga yurub uu soo bandhigay siyaasad cusub oo Qaxootiga Yurub lagula tacaalayo si wadamada yurub ay meel uga soo jeestaan ceebta heysata.
Sharciyada ay soo bandhigeen midowga yurub ee aan wali heshiiskiisa leesku raacin waxaa kamid ah in Qaxootiga Yurub ku sugan ee diimada heesta mudada dheer kiisaskooda la xaliyo tusaale ahaan kuwa u qalma helitaanka sharciga in la siiyo kuwa kalena loo sameeyo dib u celin dalkooda ah.
Qodobkan ayaa noqon kara mid Qaxootiga heesta diidmada mudada dheer iyo kuwa kale ee diidmada helay sanadihii u danbeeyay la siiyo sharciga yurub iyadoo ay dhici karto in xaaladooda lagu eego wadanka ay kasoo jeedaan iyo dhibaatada markaasi ka taagan.
Hadii Sharciga iyo Qorshaha uu soo jeediyay gudiga Midowga Yurub leesku raaco lana ansixiyo waxaa wadamada Qaar ee yurub qabandoonaan shaqo ku aadan in Qaxootiga diidmada heesta ay ku celiyaan Dalalkooda sidaasi oo ay ku helayaan dhaqaalaha Qaxootiga lagu caawiyo.
Khudbada ay xaruunta baarlamaanka Yurub ee Brussels ka jeedisay von der Leyen waxay sheegtay inay doonayaan inay abuuraan siyaasad magangalyo oo bina aadamnimo ah – badbaadinta nolosha Dadka ku soo safraya Mediterranean.
Hadii Midowga Yurub uu joojiyo Sharciga Dublin waxay dad badan fursad u helayaan inay iska dhibaan wadanka ay markaasi ku socdaan lakin maanta waxaa qasab ah in ay magangalyo waydiisato wadanka Faraha kaa qaada marka ugu horeysa.